Ciidamo ilaala u ah Xasan Cali Kheyre oo wiil dhalinyara ah ku dilay magaalada Baydhabo.
Ciidamada Alwifaaq oo si buuxda ula wareegay caasimadda Liibiya.
Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo sedax bilood kadib shaqa bilaabaya.
Sawirro+Codad: Dufcadii Ugu Horraysay oo ka qalin Jabisay Barnaamijka Carabiyaynta Dadka.
Monday September 09, 2019 - 13:27:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya fal dil ah oo ciidamada ilaalada u ah R/wasaare Xasan Cali Kheyre ay shalay ka geysteen gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Wararka ka imaanaya Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada booliska maamulka Koonfur galbeed ee qaabilsan sugidda Ammaanka Xasan Cali Kheyre ay toogasho ku dileen wiil dhalinyara ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Aadan Deerow .
Goob joogayaal ayaa sheegay in toogashadani ay ka dhacday meel ku dhow garoonka kubadda cagta Dr Ayuubi ee magaalada Baydhabo xilli halkaas uu khudbad ka jeedinayay R/wasaaraha dowladda Federaalka.
Ciidamada dilka geystay ayaa sidoo kale xiray qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo oo ay sheegeen in ay ka shakiyeen, magaalada Baydhabo oo maalmahaan uu ku sugnaa Kheyre waxaa wax u eg bandow kusoo rogay ciidamada Xabashida Itoobiya.
Waddooyinka ugu muhiimsan Baydhabo waxaa xiray ciidamada Itoobiya oo wata gaadiidka gaashaaman iyo maleeshiyaadka katirsan dowladda waxaana muuqata in Xabashidu ay shacabka udhibaataynayaan socdaalka Kheyre.
Daawo Video: Ka qeyb qaado dhismaha Masjidka Alhudaa ee magaalada Saakoow.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda qarax sarkaal lagu dilay oo ka dhacay Xamarweyne.
Qarax 10 askari lagu dilay oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee Sh/dhexe.
Al Shabaab oo weeraro askar lagu dilay ka fuliyay duleedyada Balcad iyo Dhoobleey.
Magaalada Galhareeri oo si heer sare ah looga oogay Munaasabadda Ciidul Fidriga.